SADY INNOVATION ROAD
Ny diany eny an-tsena fiaraha-miasa dia mila fitantanana vokatra, varotra, varotra marika, famolavolana, fampandrosoana, sampana fandrindrana asa tsy misy tohiny mba hiarahana amin'ny tetikasa vaovao.
tantara tantara, volavolan-drafitra volavolan-dalàna aroso amin'ny vanim-potoana, hamaritana ireo tetikasa mandroso sy ny fahazavan'ny manodidina ny 'fandresena', ampifanaraho ny fizarana fandaniana amin'ny tsena, ny teny famolavolana, ny fidirana ara-teknika ary ny famakafakana amin'ny fifaninanana, fampifanarahana ireo mpivarotra sy fahaiza-manao.
Tanjona: hamafiso ary hizara fisoratana fohy, ofisialy, manomboka ny drafitra fandehanana any amin'ny tsena, fanombohana ofisialy ny dingana famolavolana, hamolavola ny satan'ny tetik'asa ho an'ny azo tanterahina amin'ny lafiny fividianana teti-bola, ny fetr'andro ary ny loharano
Drafitra: vinavina mialoha sy fizarana fizarana
Ampifanaraho amin'ny làlan'ny famolavolana prototypa haingana 2D, avereno jerena ny fitaovana 1 an'ny prototype, hamafiso ny tari-dalan'ny 2D.
Fanapahan-kevitra feno momba ny varotra mifandraika amin'ny tanjon'ny orinasa, ny paikadin'ny fantsom-pitaovana, ny teti-doko ary ny paikadim-bidy.
FMEA, DFM, famakafakana ny fantsom-boaloboka, fitaovana, fanandramana, fanamarinana, fampandrosoana sary, fonosana, santionany vita sonia, fandrindrana fitaovana, hazakazaka mpanamory.
santionany amin'ny varotra, ary fanomanana ny famokarana, BOM, Costing, SOP, ERP.
Afaho ny PO, miasa miaraka amin'ny Chain famatsiana amin'ny fandefasana voalohany.
Vokatra ao amin'ny trano fanatobiana entana efa vonona halefa amin'ny mpanjifa.
Ny antsipiriany momba ny drafitry ny hetsika toy izao manaraka izao:
Angony ny VOC (feon'ny mpanjifa) hahazoana ny andrasan'ny mpanjifa avy eo ampiharo ny QFD (députment de qualité qualité) hamantarana ireo endri-javatra lehibe, hanome aingam-panahy ny hevitra hamoahana azy io, hamaranana ny fivoaran'ny hevitra amin'ny fanatsarana ny hevitra. Ny maodely 3D mandritra izany dia manana fandalinana FMEA sy DFM. Makà fitaovana EPS miorina tsara sy fitaovana famoronana vaccuum amin'ny alàlan'ny fitaovana mandroso ao anatin'izany ny famokarana herinaratra tariby sy ny fanapahana CNC.
Mamorona sarintany misy fiantraikany arakaraka ny fenitra misy azy, ny valin'ny lasitra ao anaty haavo voafaritra, ampiasao fitaovana fitsapana Cadex voadinika mba hanaovana fitsapana ao an-trano amin'ny alàlan'ny techinican laboratoara mahay. Hamarino ny maodely tsirairay amin'ny alàlan'ny mari-pahaizana malaza. laboratoara
Manaova torolàlana momba ny asa sy SOP (fomba fiasa mahazatra) miaraka amin'ny fandeferana amin'ny famokarana voafaritra. Manaova drafitra fanaraha-maso Process mba hahazoana antoka kalitao avo lenta. Alao sary an-tsaina ny dingana lehibe amin'ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny scrum board, araho akaiky ny fivoarana amin'ny alàlan'ny fampiasana lisitra OKR, fivoriana fijoroana isan'andro ary ny fandaharam-potoanan'ny tabilao Gantt.
Ataovy varotra ara-potoana ny tetik'asa tsirairay amin'ny vidiny lafo.
Fampidirana teknika & famakafakana fifaninanana.
Famaranana ny hevitra, famolavolana vokatra.
Volavola ho an'ny fitaovana, fitsapana ary fandaniam-bola.
Modelling Surface - Prototype haingana
Prototyping haingana be kalitao.
Famerenana ny famolavolana fiteny.
Fizahana Modex Flow.
Manatsara ny fanamafisana ny fitaovana
Fitaovana mazava tsara.
Volavola ho an'ny famokarana, famolavolana ho an'ny famakafakana fandaniam-bola.
Alao sary an-tsaina ny fandaharam-potoanan'ny fitaovana sy ny dingana lehibe.
Santionany sy fitsapana
Toeram-panadinana an-tsakany sy andavany.
Fantaro tsara ny fenitra fitsapana.
Mamorona tondrozotra misy fiantraikany ary manaova tsipika fitsapana.
Manambatra ny tatitra momba ny fanandramana ary manomeza famakafakana matihanina.
Fandehanan'ny mpanamory fiaramanidina sy ny kalitao.
Fananana feno ny rojom-panomezana iray manontolo.
Fanetezana trakta robot.
SOP sy drafitra fanaraha-maso ny fizotra mba hiantohana ny fifanarahana kalitao
Amin'ny fandefasana ara-potoana
Valiny haingana, Serivisy miompana amin'ny mpanjifa.